Ka hor kulanka adag ee chelsea iyo man united Thomas Thuchel oo ka hadlay Werner.
Home Wararka Ciyaaraha Maanta Ka hor kulanka adag ee chelsea iyo man united Thomas Thuchel oo...
Kooxda Blues weeraryahan keeda Timo Werner ayaa isha lagu hayaa kulanka caawa uu wajahayo kooxda manchester united kulan qeyb ka ah premier league xidiga reer chermany ayaa ku dhiban dhalinta goolasha kulamo badan oo is xiga xiga Thuchel ayaana inta siiya waqti uu ku hormariyo qaab ciyaaredkiisa.
Thomas Tuchel wuxuu aaminsan yahay in qaab ciyaareedkii Chelsea uu mararka qaar dib ugu soo celiyo Timo Werner madaama kooxda heysata ay baahi u qabto xaga gooldhalinta waxaana Thomas Tuchel oo ka cararayaa kooxaha ka soo horjeeda inay ka galaan qaab difaaceed markaasna loo baahan yahay in weeraryahnada Sameeyaan qayaano si daafacyada u qilaafaan.
Chelsea ayaa celcelis ahaan boqolkiiba 69 heysata kubada lixdii kulan ee horyaalka tan iyo markii Tuchel uu la wareegay shaqada chelsea taasoo keentay in kooxda ay xafiiltamaan ay si qoto dheer u fariistaan oo ay ku garaacaan ciyaarta.
Werner ayaa dhaliyay hal jeer sideedii kulan ee uu ciyaaray tan iyo markii Tuchel qabtay shaqada blues In kasta oo weeraryahanku muujiyey astaamo horumar, haddana kooxda Blues ayaa wax badan ka dalban doonta xidigaan ku qiimeysan 47.5 milyan ginni.
Tuchel wuxuu sheegay inuu u tacsiyeeyay halganka Werner wuxuuna sharaxay sababta uu u sii wado inuu doorto inkasta oo uusan lahayn yoolal.
Waxaa laga yaabaa inay tahay qaladkeena sababtoo ah waxaan heysanaa hanti badan waxaanan ku riixnaa kooxaha ka soo horjeeda si aad u qoto dheer qeybtooda sidaa darteed boosasku aad uma weyna,\_” ayuu yiri Tuchel.
“Awoodda ugu weyn ee Timo waa in la weeraro booska ka dambeeya safka ugu dambeeya sidaas darteed waxaa laga yaabaa inay sidoo kale qaladkeena ku tahay ciyaarta ugu weyn ee aan ciyaareyno xilligan, waa wax iska caadi ah in boosaska ay xiraan kooxaha ka soo horjeeda.
Wax badan ayaan ka fikirnaa tan oo wax badan ayaan la shaqeyneynaa Waxa kale oo jira xalal meelaha cidhiidhiga ah si loogu isticmaalo xawaarehiisa mitirka ugu horreeya, si loogu isticmaalo dardarkiisa.
“Laakiin uma sahlana isaga waana arki karaa tan waana sababta aan u ahay qof dulqaad badan oo aad u taageersan waxaanan aaminsanahay kartidiisa iyo dabeecadiisa iyo dabcan xirfadiisa gooldhalinta.\_”
Previous articleRonald Keoman oo isbedel ku sameeyey Qaab ciyaaredka barcelona kulankii Sevilla.
Next articleBarcelona oo xiiseynaysa daafaca kooxda inter Alessandro Bastoni.